တောင်သမန်သားလေး: March 2014
<string>123456 </string> ကြားက နံပါတ်များသည် Password ဖြစ်ပါတယ်။
Credit to : http://www.mm-mpxteam.net
Posted by lin linn at 12:41 AM
Tizen OS သုံး Samsung စမတ်ဖုန်းထွက်တော့မည်
Samsung တို့ ကိုယ်တိုင်ဖန်တီးကြိုးစားထားတဲ့ Tizen OS နဲ့ စမတ်ဖုန်း ထွက်ရှိမယ်ဆိုတာ ၂၀၁၃ နှစ်ကုန် လောက်ကတည်းက ထွက်ရှိတဲ့ သတင်း ဖြစ်ပါတယ်။ ယင်းသတင်းကို သေချာအောင် ယခုတော့ ဖုန်းကိုပါ အလုံးလိုက်အထည်လိုက် မြင်နေရပြီ ဖြစ်ပါတယ်။ Samsung က တရားဝင်ကြောညာခြင်း မဟုတ်ပေမယ့် တောင်ကိုရီးယားအခြေဆိုက် နည်းပညာ သတင်းဌာနများက ဖော်ပြခြင်း ဖြစ်ပါတယ်။
Android OS အစားထိုးမယ့် Samsung ရဲ့  ကိုယ်ပိုင် Tizen OS ဟာ ထူးခြားပါတယ်။ Android အသွင်အပြင်၊ Windows Phone OS အသွင်အပြင် ကို ပြန်ယူထားပြီး iOS7 လို အရောင်နုနု icon လေးတွေ ကို မြင်ရ အုံးမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ Home Screen ကတော့ Windows Phone OS နဲ့တောင် မကွာ ပါဘူး။ ဖုန်းကို Zeke လို့ အမည် ပေးထားပြီး Samsung ZEQ 9000 လို့လည်းခေါ်ပါသေးတယ်။ မျက်နှာပြင်အားဖြင့် ၄.၈ လက်မ ရှိပြီး HD မျက်နှာပြင် တပ်ဆင်ထားခြင်း ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့်မို့ Samsung Galaxy S4 ထက် အရည်ပိုသေး သွားပါတယ်။ Processor ကတော့ 2.3 GHz Qualcomm Snapdragon 800 CPU အသုံးပြုပြီး ကျန်တဲ့ Feature များကတော့ Samsung Galaxy S4 က ဟာ့ဒ်ဝဲများနဲ့ သိပ်မကွာဘူး ဆိုပါတယ်။ သို့ပေမယ့် Android platform ပေါ်က ဖုန်းမဟုတ်တော့ Galaxy စီးရီးနဲ့ သွားယှဉ်လို့ မရပါဘူး။
Zeke က တစ်သီးတခြား ထွက်ရှိလာမယ့် စမတ်ဖုန်း ဖြစ်ပါတယ်။ ၂၀၁၃ ခုနှစ်က Mozilla တို့ Firefox OS မိတ်ဆက် ခဲ့တာမျိုးနဲ့ ဆင်တူနေပါတယ်။ သို့ပေမယ့် စွမ်းဆောင်ရည်နဲ့ Feature များကတော့ ကွဲအုံးမှာပါ။ လာမယ့် ဖေဖော်ဝါရီလ ၂၃ ရက် Mobile World Congress မှာ Samsung တို့ ထုတ်ဖော်ပြသမယ့် စမတ်ဖုန်း ဖြစ်ကြောင်း သိရ ပါတယ်။
Y535-C00 root.apk ဖုန်းထဲမှာတင် root လို့ရနိုင်ပါတယ်
Nero နဲ့သီချင်း များ ဓာတ်ပုံများထည့်၍ Photo Slide Show လုပ်နည်းနှင် Nero 8 ဆော့ဝဲ Full Version with Key
ပို့ ပေးလိုက် ဟိုဘက်ကလည်း ဒေါင်းလုပ်ယူပြီး နားထောင်ပေါ့
ပါသေးတယ် မြန်မာလို ဘာလို့ ပြောင်းမရတာလည်း မသိဘူး
Download - Nero 8( witk key gen and Key)
★★ Adobe Photoshop Touch v1.5.1 Apk (All Android) ★★
5 Novembre 2013 ရက်နေ့က Update ထွက်လာတဲ့ Adobe Photoshop Touch v1.5.1 ကိုတင်ပေး
လိုက်ပါတယ်။Android 3.1 နှင့်အထက်ကစပြီးအသုံးပြုနိုင်ပါတယ်။လုပ်ဆောင်ချက်တွေကိုတော့အောက်
DetailsTitle: Adobe ® Photoshop ® TouchDeveloper: Adobe SystemsVersion: v1.5.1 ( November 5, 2013 )Genre: Photography / Photo EditingLanguage: MultilingualSupported OS : Android 3.1 +Total Size: 45.7 MBdescriptionTransform images freely using the main features of Adobe Photoshop application designed specifically for the tablet .Combine images , apply professional effects and share the results with friends and family via Facebook and Twitter: all with the convenience of your iPad .• Take full advantage of Photoshop features designed specifically for the tablet such as layers , selection tools , adjustments, and filters to create great images.• Use your tablet camera to fill an area onalayer with the exclusive camera feature .• Select part of an image to extract by scribbling with the Scribble Selection tool . With Refine Edge , you can use your fingertip to capture simply too difficult to select image elements , such as hair .• Work on high-resolution images while keeping the quality at the highest level . Supports images up to 12 megapixels.• Follow the step by step tutorials to easily learn the techniques used by professionals and achieve exceptional results .• Try and capture images with the integrated Google Image Search .• Browseagallery from which you can draw inspiration for the styles and results you want to achieve .• Sync automatically projects on Adobe Creative Cloud and open layered files created in Adobe Photoshop Touch in Photoshop or Photoshop CS6 CS5.1 .• Free membership to Creative Cloud entitles you to2GB of cloud storage , plus the ability to synchronize projects between tablet and desktop computers , access your files from the Web and share them easily with others. Read more : http://www.adobe.com/it/products/creativecloud.html
1. Copy the file "Adobe Photoshop Touch v1.5.1.apk" in your Android device.
2. Install the software by starting the above files from your device.
(Make sure the "Unknown Sources" in Settings -> Security is checked)
3. Start the software from the applications menu.
✔Root Apk များ စုစည်းမှု✔
✔Root Apk များစုစည်းမှု✔
-မိမိဖုန်းထဲမှာတင်​ apk ကိုအသုံးပြုပြီး root ​ဖောက်​လို့ ရ​စေနိုင်​မယ့်​ application ​ပေါင်း
ခုနှစ်​မျိုးကို စုစည်းပြီး တင်​​ပေးလိုက်​ပါတယ်​-
-ဖုန်း Handset ​ပေါင်းများစွာရှိတာ​ကြောင့်​ Device အားလုံးနဲ့ အဆင်​​ပြေ/မ​ပြေ ဆိုတာကို
★root apk အားလုံးကို rar file တစ်​ခုထဲ
★rar file အဖြစ်​ရယူရန်​★
★Apk တစ်​ခုခြင်းစီ ရယူရန်​★
★Vroot Apk v1.0.5.1★
★Root Master Apk v1.3.6★
★Baidu Root Apk v2.3.4★
★Pro Myanmar Root v1.3.6★
★Framaroot Apk v1.9.1★
★360 Root Apk v1.1★
★King Root Apk v2.3.0★
ဒေါင်းလုပ် Link တော့မဟုတ်ပါ။ သို့ပေမယ့် Click တစ်ချက်လောက်နှိပ်ပေးမယ်ဆိုရင် ကျွန်တော့်ကိုအများကြီးကူညီရာရောက်ပါတယ်ဗျာ
Myanmar Youth Media Club 21 Mar 2014 (Find7အကြောင်း)
MYMC မှာ အမြဲမပြတ် ပေါ်သမျှ Smartphone တွေအကြောင်းတွေ နည်းပညာ အကြောင်းတွေကို
တင်ပြလာ ခဲ့ရာမှာ ယခုအခါ မှာလည်း Oppo ကုမ္ပဏီရဲ့ Smartphone အသစ် Find7အကြောင်း
Oppo ကုမ္ပဏီဟာ တရုတ်ကုမ္ပဏီ ဖြစ်ပါတယ်။ တရုတ်လုပ် ဆိုလို့ "တရုတ်စက် တစ်ရက်စုတ်"
လို့အထင် မမှားလိုက် ကြပါနဲ့။ ဒီ Find 7က တော့ တော်တော်လေး အဆင်ပြေတဲ့ Smartphone
တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ အထူးသဖြင့် ဒီဖုန်းရဲ့ သိသိသာသာ ကောင်းတာ ကတော့ Camera ပါပဲ။ ဒီဖုန်းနဲ့
ရိုက်တဲ့ ပုံတွေဟာ 50 Megapixels အထိ လုံးဝ ကြည်လင်တဲ့ ပုံတွေကို ရိုက်ကူး နိုင်ပါတယ်။
အမှန်အတိုင်း ပြောရရင် Smart phone တွေထဲမှာ လက်ရှိ Camera အကောင်းဆုံးဖြစ်တဲ့ Nokia
Lumia တောင်မှ 41 Megapixels အထိပဲ စွမ်းဆောင် နိုင်တာပါ။ ဒါ့ကြောင့် ဒီ Find7ဟာဘာတွေ
လုပ်ထားလို့ Megapixels အမြင့်စားကို စွမ်းဆောင် ပေးနိုင် သလဲဆိုတာ စိတ်ဝင်စား စရာပါပဲ။ ဒီနေရာ
မှာတော့ သူတို့ ကုမ္ပဏီက နည်းနည်းလေး လှည့်ကွက်လေး သုံးထား တာကို ပြောပြချင် ပါတယ်။
Oppo Find7က Camera ဟာပုံမှန် အတိုင်းဆို 13 Megapixels ပဲ စွမ်းဆောင် ပေးနိုင် ပါတယ်။
ဒါပေမယ့် Super Zoom ဆိုတဲ့ Feature လေးသုံးပြီး ကိုယ်ရိုက် ချင်တဲ့ နေရာကို Zoom နဲ့ နေရာအနှံ့
ဆယ်ပုံ အမြန်ရိုက်ပြီး အကောင်းဆုံး လေးပုံကို ပေါင်းစပ် လိုက်တဲ့ အခါမှာ 6120 x 8160 resolution
ရှိတဲ့ 50 Megapixel ပုံရလာ ပါတယ်။
Find7မှာ Camera တင်ကောင်းတာ မဟုတ်ပါဘူး။ အခြား ပါဝင်တဲ့ အစိတ်အပိုင်း တွေလည်း အံ့မခန်း
ပါပဲ။ Screen အနေနဲ့ 5.5 inch ရှိပါတယ်။ Screen Resolution အနေနဲ့ 2560 x 1440 အထိ
စွမ်းဆောင် ပေးနိုင်တဲ့ Quad HD display ကို သုံးထား ပါတယ်။ Processor အနေနဲ့ 2.5 GHz
Qualcomm Snapdragon 801 သုံးထားပြီး HD ထက်ကောင်းတဲ့ 4K video တွေကိုတောင်
ရိုက်ကူးပေး နိုင်ပါတယ်။ ချောမောတဲ့ Screen ကိုတော့ Gorilla Glass3နဲ့ပြုလုပ် ထားပါတယ်။
Performance ပိုင်းအနေနဲ့3GB RAM ပါဝင်ပြီး 32 GB အထိ Data သိမ်းနိုင်ကာ Data storage အတွက်
တိုးချဲ့ နိုင်အောင် microSD slot တွေလည်း ပါဝင်ပါ သေးတယ်။ ခေတ်မီ 4G LTE networks တွေကို
ချိတ်ဆက် နိုင်ပြီး ဈေးနှုန်း အနေနဲ့ ၅၉၉ ဒေါ်လာ ဖြစ်ပါတယ်။ (20400 Bath)
ဒေါ်လာ ၅၉၉ တန် Find7version ကိုဈေးကြီး တယ်လို့ မ၀ယ် ချင်ဘူး ဆိုရင် သူ့ထက် နည်းနည်း
နိမ့်တဲ့ ဒေါ်လာ ၄၉၉ တန် version လဲရှိပါ သေးတယ်။ သူကတော့ အပေါ်က version နဲ့ယှဉ် ရင်တော့
အရာရာမှာ နိမ့်ကျ နေပါတယ်။ အထူးသဖြင့် Screen Display ဟာ Quad HD အစား Full HD
သာပေးနိုင်ပြီး Resolution အနေနဲ့ 1920 x 1080 သာပေးနိုင် ပါတယ်။ Processor အနေနဲ့ 2.3 GHz
သာစွမ်းဆောင် နိုင်တဲ့ Snapdragon 800 ကိုသုံးထားပြီး2GB RAM နဲ့ Data သိမ်းဖို့ 16 GB သာ
ပါဝင်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ဒီ version ကတောင် iPhoneလို တခြားသော နာမည်ကြီး
Smartphone တွေနဲ့ ကောင်းကောင်း ယှဉ်လို့ ရတဲ့အထိ ကောင်းပါတယ်။ Oppo ရဲ့ Find7ကို ဈေးကွက်
သွင်းမယ့် အချိန် ကာလကတော့ မသိရသေး တာကတော့ စိတ်ခိုးလိုး ခုလု ဖြစ်စရာ ရှိနေတဲ့ အတွက်
စိတ်မကောင်း ပါဘူး။ ဘာလိုပဲ ဖြစ်ဖြစ် ကောင်း မွန်တဲ့ စွမ်းဆောင် မှုမျိုးနဲ့ ဆွဲဆောင်မယ့် Oppo Find 7
ကိုစာဖတ် သူများ အနေနဲ့ စိတ်ရှည်ရှည် ထားပြီး စောင့်စား ကြပါစို့လို့ တိုက်တွန်းရင်း နိဂုံးချုပ် အပ်ပါတယ်။
Images from gsmarena, postmobliereview, cbsistatic, mashable, techz. Source: mashable.com
လူတိုင်းလူတိုင်းအတွက် အလွန်တန်ဖိုးရှိသော Software လေးတစ်ခု Knowledge Box 1.1 (4MB )
Knowledge Box လူတိုင်းလူတိုင်းအတွက် အလွန်တန်ဖိုးရှိသောကွန်ပျူတာဆော့ဝ်လ်ဖြစ်ပါသည်။ ကွန်ပြုတာ ၊ မိုဘိုင်းဖုန်း ၊ နည်းပညာလောကတွင်
ကျော်ကြားသူများအကြောင်း အကျဉ်းချုပ် နှင့် တစ်ခြားအထွေထွေနည်းပညာ ဗဟုသုတများကို အလွယ်တကူ၊
အချိန်မရွး အင်တာနက်မလိုဘဲ ( Offline ) ဖတ်ရှုနိုင်ရန် စုစည်းပြီး ဒီဆော့လ်ဝဲကို ရေးသားလိုက်ပါတယ်။
ယခုဗားရှင်းအသစ်မှာ အကြောင်းအရာပေါင်း ၂၃၁ ခုပါဝင်ပြီး စာလုံးအရွယ်အစားကိုလည်း
ပြောင်းလဲနိုင်ပါတယ်။ ဖိုင်ဆိုဒ်က 4.11 MB ရှိလို့ ဒေါင်းလုပ်ဆွဲရာမှာ အဆင်ပြေမှာဖြစ်ပါတယ်။
ကွန်ပြူတာအတွင်း ပုရွက်ဆိတ်လေးတွေ မွေးထားချင်သူများအတွက် 12-Ants 2.41 portable
ကွန်ပြူတာအတွင်း ပုရွက်ဆိတ်လေးတွေ မွေးထားချင်သူများအတွက်
အရမ်းလန်းတယ်....:D .......ပုရွက်ဆိတ်လေးတွေက ကွန်ပြူတာအတွင်းပြေးလွှားနေစေမဲ့
ဆောလ်ဝဲလေးဖြစ်ပါတယ်။ဖိုင်ဆိုဒ်ကလဲ 1.MB တောင်မပြည့်လို့ အဆင်ပြေပြေဒေါင်းယူနိုင်ပါတယ်။
Viva ဆိုတဲ့ apk ကို android ဖုန်းထဲမှာ Install လုပ်ပြီး Video
တစ်ခု ဖန်တီးနိုင်ပါတယ်.. ကိုယ့်ရဲ့ အမှတ်တရဓါတ်ပုံလေးတွေကိုပဲဖြစ်ဖြစ်၊
ရိုက်ထားတဲ့ Video လေးတွေကို စုစည်းလို့ပဲဖြစ်ဖြစ်
Movie လေးတစ်ခု ကောင်းကောင်း လုပ်နိုင်ပါတယ်..
Slide ဒီဇိုင်းမျိုးစုံကိုရယူနိုင်ပြီး Online
ခဏဖွင့်ထားရင် ဒေါင်းလို့ရပါတယ်.. Free ပါ..
စာလုံးဒီဇိုင်းမျိုးစုံပါဝင်ပြီး မြန်မာလိုလည်း ရေးလို့ရတယ်ခင်ဗျ..
ထိုင်းနိုင်ငံမှာ ယာယီ နိုင်ငံကူးလက်မှတ်နဲ့ အလုပ်လုပ်နေတဲ့ မြန်မာ
အလုပ်သမား တွေထဲက ၄ နှစ် သက်တမ်း ပြည့်သွားတဲ့ သူတွေကို
ပုံမှန် နိုင်ငံကူး လက်မှတ်တွေ စတင် ထုတ်ပေးနေပြီ ဖြစ်ပါတယ်။
ထိုင်းနိုင်ငံမှာ ယာယီ နိုင်ငံကူး လက်မှတ်နဲ့ အလုပ်လုပ်နေတဲ့ မြန်မာ
အလုပ်သမား ၁၇ သိန်းကျော်ရှိတဲ့ အထဲက အလုပ်လုပ်ခွင့် ၄
နှစ်သက်တမ်း ပြည့်သွားတဲ့ အလုပ်သမားတွေကို လက်ရှိ
ကိုင်ဆောင်ထားတဲ့ ယာယီ နိုင်ငံကူးလက်မှတ် ခရမ်းရောင်
အစား နိုင်ငံတကာကို သွားလာခွင့် ရှိတဲ့ ပုံမှန် နိုင်ငံကူး
လက်မှတ် စာအုပ် အနီတွေကို စတင် ထုတ်ပေးနေတာ ဖြစ်ပါတယ်။
မြန်မာ အလုပ်သမားတွေကို ထိုင်းနိုင်ငံက ၄ နှစ်ထက်
မကျော်တဲ့ အလုပ်လုပ်ခွင့်ကိုသာ ပေးတာဖြစ်ပါတယ်။
၄ နှစ်သက်တမ်း ပြည့်သွားတဲ့ မြန်မာ အလုပ်သမားတိုင်းဟာ
မြန်မာဘက်ကို နေ့ချင်းပြန် ဖြစ်စေ တစ်ခေါက် ပြန်ကြရပြီး
ထိုင်းက ထွက်သွားတဲ့ သူတွေကိုမှ ဗီဇာအသစ်နဲ့
အလုပ်လုပ်ခွင့် လက်မှတ်အသစ်တွေ ထုတ်ပေးမှာ ဖြစ်တယ်
လို့ ထိုင်းအလုပ် သမားဝန်ကြီးဌာန ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်
ပရာ့ဝစ် ခီးယန်းဖွန်က ဘီဘီစီကိုပြောပါတယ်။
နိုင်ငံကူး လက်မှတ်တွေကို အုပ်စု ၃ စု ခွဲကာ ထုတ်ပေးနေပြီး
ပထမ အုပ်စု အနေနဲ့ မှတ်ပုံတင်၊ အိမ်ထောင်စု စာရင်း
အပြည့်အစုံ ရှိတဲ့သူတွေကို ဘန်ကောက်က မြန်မာသံရုံးမှာ
နိုင်ငံကူး လက်မှတ် ထုတ်ပေးမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
ဒုတိယ အုပ်စု အနေနဲ့ မှတ်ပုံတင် မရှိတဲ့သူတွေကတော့
မြန်မာနိုင်ငံကို ပြန်ပြီး မှတ်ပုံတင် ပြန်လုပ်ရမှာ ဖြစ်ပြီး
နောက်မှ ပုံမှန် နိုင်ငံကူး လက်မှတ်ကို ထုတ်ပေးမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
တတိယ အုပ်စုက ယာယီ နိုင်ငံကူး လက်မှတ် သက်တမ်း
၂နှစ်ကျော် ကျန်နေသေးတဲ့ သူတွေအတွက် ရည်ရွယ်တာ
ဖြစ်ပြီး သူတို့အနေနဲ့ ဆက်လက် အလုပ်လုပ်ချင် လုပ်နိုင်ပြီး၊
ဆက်လက် အလုပ်မလုပ်ဘဲ ပုံမှန် နိုင်ငံကူး လက်မှတ်နဲ့
ပြောင်းလဲ ကိုင်ဆောင်ချင်ရင်လည်း ပြောင်းလဲလို့ ရတယ်လို့ ဆိုပါတယ်။
ထိုင်းနိုင်ငံ မယ်ဆိုင်၊ မဲဆောက်နဲ့ ရနောင်းမြို့တွေမှာ
ပူးတွဲရုံးတွေ ဖွင့်လှစ် ဆောင်ရွက်ပေးနေပြီး
ဘန်ကောက်က မြန်မာ သံရုံးမှာလည်း နိုင်ငံကူးလက်မှတ်တွေ
စတင် ထုတ်ပေးနေပြီးလို့ အလုပ်သမား-အလုပ်အကိုင်နဲ့
လူမှုဖူလုံရေး ဝန်ကြီးဌာန က ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်
နိုင်ငံကူးလက်မှတ်ဖိုးနဲ့ ဝန်ဆောင်ခပါ အပါအဝင် ဘတ်ငွေ
၁၆ဝဝ ကုန်ကျမှာ ဖြစ်ပြီး ထိုင်းဘက်မှာတော့ ဗီဇာကြေး၊
အလုပ်လုပ်ခွင့် လက်မှတ်နဲ့ ဆေးကုသခွင့်တွေ
အတွက်ပါ ဆိုရင် ဘတ်ငွေ ၇ ထောင်ကျော် ကုန်ကျမှာ ဖြစ်တယ်လို့ ဆိုပါတယ်။
Sumsang ဖုန်း Andriod Version 4.2.2 နဲ့ အထက် Galaxy S2, S4
အပါဝင် Root ဖောက်စရာ မလိုပဲ မြန်မာဖောင့် သွင်းနည်းဖြစ်ပါတယ်။
ဒီနောက်ပိုင်း Sumsang ဖုန်းတွေက Andriod Version 4.2.2
နဲ့ အဲ အထက်တွေပဲ ထွက်လာပါတယ်။ ကျနော် တို့ သာမန် zawgyi one.apk နဲ့
Install လို့ Support မလုပ်တော့ပါဘူး။ ဒါကြောင့် ဖုန်းကို Root ပြီး ထည့်ရတာများပါတယ်။
အခုတင်ပေးတဲ့ နည်းလေးက ဖုန်းကို Root စရာမလိုပဲ Setting> My device > display> font style
မှာပဲ မြန်မာဖောင့် ပြောင်းတဲ့နည်းလေးဖြစ်ပါတယ်။
မသိသေးတဲ့ သူငယ်ချင်းများအတွက် ရည်ရွယ်ပြီး တင်ပေး လိုက်ပါတယ်။
အရင်ဆုံး အောက်မှာ ကျနော်ပေးထားတဲ့ Zawgyi-One Naw Flipfont ကို အရင် Install လုပ်ရပါမယ်။
ပြီးရင်တော့ S4 Zawgyi-One Naw Flipfont ကို ဖွင့်လိုက်ပါ။
ပြီးရင် Setting> My device > display> font style ကိုသွားပြီး မိမိ နှစ်သက်ရာ
Font Style မှ တခုခုကို Select ပေးလိုက်ရင် မြန်မာလို ကောင်းကောင်းမြင် ရပါပြီ။
Android Version 4.2.2 အထက်ဖုန်းတွေ အားလုံးနည်းပါး ဒီအဆင့်နဲ့
ပဲ အဆင်ပြေတာ များပါတယ်။ ပြီးရင်တော့ Zawgyi Keybroad
ကိုတော့ ဒီအောက်ကလင့်မှာ ဒေါင်းယူလိုက်ပါ။
ပြီးရင် Setting–>>My device >> Language and input
>>Frozen keyboard Pro ကိုအမှန်ခြစ်ပေးလိုက်ပြီး Default keyboard
>>Frozen Keyboard Pro ကိုရွေးပေးထားပါ။
ဒီလောက်ဆိုရင် အားလုံးအဆင်ပြေနိုင်မယ်ထင်ပါတယ်။ ဒီနောက်ပိုင်းထွက်တဲ့
Sumsang Galaxy Ace3တို့ Galaxy S3, S4 တွေမှာ အားလုံးအဆင်ပြေပါမယ်။
Frozen Keybroad Pro အဆင်မပြေတဲ့ သူငယ်ချင်းများက နောက်ထပ် မြန်မာ
ကီးဘုတ်တခုကို ဒီလင့်မှာ ဒေါင်းယူလိုက်ပါ။ အဆင်မပြေ တာများရှိရင်
zawmintan@gmail.com ကို add ပြီး အကူညီတောင်းနိုင်ပါတယ်။
ခုလိုအားပေးတဲ့အတွက် အထူးကျေးဇူးတင်ပါကြောင်း ပြောကြားပါရစေ..ဘလော့ခရီးသည်မှ နည်းပညာများအား မည်သူမဆို လွတ်လပ်စွာ ကူးယူသုံးစွဲနိုင်ပါတယ်.
Android ဖုန်းတွေအတွက် လိုအပ်သော usb driver များကိုတစ်နေရာတည်းမှာ အလိုရှိတိုင်းအဆင်ပြေပြေဒေါင်းလုပ်ယူလို့ ရနိုင်အောင် စိတ်ကူးပြီး စုစည်းထားပေးပါတယ်ခင်ဗျာ။
ဘာပဲလိုလို ဒီနေရာလေးမှာ လိုအပ်သလိုလာရောက်ယူငင်နိုင်ပါတယ်။
ကျေနပ်ပါပြီ။ လိုအပ်သောusb driver များရှိနေရင် အားမနာတမ်းကွန်မန့် ပေးထားခဲ့ ပါ (ထပ်မံရှာဖွေပေးပြီး တင်ထားပေးပါမယ်)
Samsung USB driver - zippyshare ; solidfiles ; mediafire
Sony USB driver ; zippyshare ; solidfiles ; mediafire
Htc USB driver , solidfiles , mediafire
LG USB Driver , mediafire , solidfiles
Motorola usb driver - Download
ASUS Android USB Driver , mediafire , solidfiles
ASUS PC SUITE - DOWNLOAD
ASUS NEXT7USB DRIVER , Mediafire , solidfiles, ZIPPYSHARE
Huwaei Hisutie , mediafire , solidfiles
Imobile usb driver , DOWNLOAD
OPPO USB DRIVER , SOLIDFILES , ZIPPYSHARE
Zte Android Driver , mediafire , solidfiles
Acer usb driver , Download
Read more at AndroidJinn: Download Android USB Drivers For Windows OS http://androidjinn.com/?p=3643
Dell usb driver , DOWNLOAD
Fujitso usb driver , DOWNLOAD
Garmin asus usb driver , DOWNLOAD
HISENSE USB DRIVER , DOWNLOAD
Intel usb driver , DOWNLOAD
kt tech usb Driver , DOWNLOAD
kYOCERA USB DRIVER , DOWNLOAD
LENOVO USB DRIVER , DOWNLOAD
PANTENCH USB DRIVER , DOWNLOAD
PEGATON USB DRIVER , SOLIDFILES
SHARP USB DRIVER , DOWNLOAD
teleepoch usb driver , DOWNLOAD
YULOONG COOLPAD USB DRIVER , DOWNLOAD
နောက်ထပ်မဖော်ပြရသေးတဲ့USB DRIVER များကို ဒီနေရာမှာ ယူနိုင်ပါတယ်။
Credit to ==> ဘလော့ခရီးသည်
Y535-C00 root.apk ဖုန်းထဲမှာတင် root လို့ရနိုင်ပါတ...
Nero နဲ့သီချင်း များ ဓာတ်ပုံများထည့်၍ Photo Slid...
★★ Adobe Photoshop Touch v1.5.1 Apk (All Android) ...
Myanmar Youth Media Club 21 Mar 2014 (Find7အကြော...
လူတိုင်းလူတိုင်းအတွက် အလွန်တန်ဖိုးရှိသော Software ...
ကွန်ပြူတာအတွင်း ပုရွက်ဆိတ်လေးတွေ မွေးထားချင်သူများ...
ပျောက်ဆုံးတာ ၃၅ နှစ်ကြာပြီဖြစ်တဲ့ လေယာဉ် တစ်စင်းအေ...
Myanmar Zawgyi Pad (v1.1) Update (မြန်မာ Font ထည့်...
ဖုန်းပိတ်မယ် For Android
Original Font style မှာ မြန်မာ font ချိန်းမရသော Sa...
Myanmar Input Method for AndroidTuesday, March 11,...
သာ့ခတ်မယ် မြန်မာမှုပြုထားပါသည် (app တွေ lock ချဖို့...
I Device များ Battery စားသက်သာစေရန် လုပ်ဆောင်သင့်ေ...
Tubemate 2.0.9 APK Android Youtube Downloader
Internet Download Manager 6-18 build 11 Full Versi...
CyberLink PowerDirector 11 Smilekey and Keygen ...
Cyberlink Power Director 11 ( Full Version ) Poste...